Ogaden News Agency (ONA) – Mrs. Clinton oo uga digtay Afrika Gumaysiga Cusub (New Colonilaism)
Mrs. Clinton oo uga digtay Afrika Gumaysiga Cusub (New Colonilaism)
Posted by ONA Admin	/ June 12, 2011
Lusaka – Xoghayaha Arimaha Dibadda ee Mareylanka Marwo Hillary Clinton oo ka bilowday dalka Zambiya socdaal ay ku mareysa dhowr dal oo Afrika ah ayaa waxay uga digtay dadka Afrikaanka ah inay dib ugu noqdaan gumaysi laakiin nooc ka duwan midkii hore.
Waxay digniintaa u bixisay Mrs Clinton ka dib markii dalal ay ugu horeyso Shiinaha aad u kordhiyeen xidhiidhka ay la leeyihiin dawladaha Afrika, iyadoo dawladda Shiinaha adeegsanaysa awoodeeda dhaqaale inay ku hanato gaar ahaan madaxda Afrika.
Mrs Clinton oo wax laga weydiiyay arimaha Shiinaha eek u sii fidiya dalalka Afrika ayaa waxay tidhi Afrikaanka waxaa la gudboon inay ka feejignaadaan kuwa ku xidhan madaxda oo kali ah. Waxay raacisay;
“Ma doonayno inaan ku aragno Afrika Gumaysiga Cusub.”
Dawladda Shiinaha oo ka mid ah kuwa ugu hooseeya marka la eego arimaha xuquuqul insaanka ayaa aad ugu dhex jirta Afrika gaar ahaan dawladaha Afrikaanka ah ee laga dalbo inay hagaajiyaan meel ka dhaca Xuquuqda Aadanaha si loo siiyo taageero dhaqaale ayay dawladda Shiinaha aabayeel la’aan u siisaa dhaqaale xoogan iyo gacan qabasho aan ku xidhnayn shuruudaha reer Galbeedka ee ah inay hagaajiyaan Xuquuqda Aadanaha. Dhiigyacabka Itobiya KT Meles Zinawi ayaa ka mid ah dalalka Afrikaanka ah ee Gumaysiga Cusub ee Shiinaha dib u galiyay dalalkooda.
Mrs Clinton waxay tidhi; ” Waan rabnaa in ay dad maalgalin ku sameeya Afrika yimaadaan, waxaanse doonaynaa inay si habsami ah u fuliyaan oo aanay meel uga dhicin maamul wanaagii lala rabay Afrika.”
Lacag gaareysa ilaa iyo 10Bilyan oo doolar ayay dawladda Shiinaha ku shubtay Afrika laga soo bilaabo 2009 iyadoo waxyaabihii ay ka iibsanayeena uu kor u kacay. Hasa ahaatee Shiinaha waxay dabaqaysaa hadda nidaamkii hore ee dawladaha Afrika lagu gumaystay oo ah sida ay sheegtay Mrs Clinto markay tidhi;
” Waxaan la soconaa inay sahal tahay in dal inta la yimaado la qaato khayraadkiisa dabiiciga ah, xoogaa loo tuuro madaxda lagana tago sida waayadii hore ee gumaysiga uu soo galayaya Afrika.”
Taasina way ka duwan tahay bay tidhi habka ay doonayso dawladeeda Mareykanka oo ah in kor loo qaado arimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo maamul wanaaga. Waxayna tusaale ahaan u soo qaadatay hawlaha ay ka wadaan dalka Zambiya oy tidhi;
” dawladda Mareykanka waxay maalgalisaa dadka shacabka ah ee reer Zambiya ee ma maalgaliso madaxda oo kali ah, taasoo waqtiga fog uu waxtarkeeda soo baxayo.”
Waxay ugu baaqday dalalka Afrika inay ka tusaale qaataan dawladaha Asia sida ay xukuumadaha leh maamul wanaaga ay u horumarin karaan dhaqaalahooda, hasa ahaatee bay tidhi Shiinaha ma noqon karaan tusaale lagu daydo.
Shiinaha ayay ku tilmaantay dal aan ogolayn xoriyadda shaqsiga ah oo xataa dadkiisa ka xanibay adeegyada Internetka. Waxay ugu baaqday inay duruus ka qaataan Mareykanka iyo dawladaha dimoqraadiga ee xorta ah.
Wuxuu caalamka wada arkay hadda dhul boobka ay maalqabeeno Asia ah ku hayaan dalalka Afrika iyagoo gacansaar la leh madax kooban oo laaluush siinaya. Itobiya ayaa madaxa koobaad gashay dhul boobka iyadoo budhcadda Wayaanaha ah ee xukunka haysata aanay wax aabayeel ah u haynin dadka shacabka ah ee dhulkooda ay ka rarayaan si ay u siistaan wax ka yar 2$ halkii Hector taasoo noqtay arin aad loola yaabo caalamka oo fadeexad ah.